Shabakad Maafiyo ah oo Dowladda Soomaaliya ka dalbatay Abaalmarin qaraxyadii Muqdisho kadib (qormo) – Radio Daljir
Abriil 1, 2019 2:11 g 0
Markaan arko Madaxweynahayga Farmaajo,markaan arko raysal wasaarahayga Khayre,markan arko wasiir Bayle,markaan arko,golaha labada aqal,markaan arko hay adaha amaanka,markaan arko Caasimada dalkayga nabada iyo hormarka,markaan arko quruxda shacabka soomaaliyeed waxaan dareemaa POWER awood iyo in karaamadii soomaaliya soo ceshayday.
Waxaan rabaa in aan shacabkayga soomaaliyeed xasuusiyo,in aynu leenahay taariikh filweyn,oo aan kaga badalanahay,shanta qaaradood ee aduunka,waxaynu leenahay dhaqanka uugu sareeya aduunka,waxaynu nahay dad gob ah. markaynu ahayn dawlada waxaa inaga cabsan jiray labada quwadood ee aduunka uugu xooga iyo aqoonta badnaa waa ussr midawgii soofiyeeti iyo maraykan,oo aynu iska diidnay in wax naloo yeeriyo iyo daciifnimo kabaqaad taas weeye cabsida aan ka hadlayaa.
Waan hadaloo waxaynu niri,”gaajo gobonimo leh ayaan ka dooranay dharag ah gunimo.”qaarada afrika ninka kaliya ee afkiisu u qaran yahay waa inagan ah soomaali.Markaynu iska burburinay dawladnimadeenii iyo qaranimadeenii ayaa habarwalbaa isku keentaagtay. Geesiga inoo kacay maanta waad aragtaan in dawladihii caalamku inoo baratamayaan nin walbaana arji usoo qortay soomaaliya oo ah heshiis wax wada qabsi.
Raga aqoonta leh ee reer galbeedku waa sheegeen waxayna saadaaliyeen in mudo yar afrika ay soomaali majaraha u qabanayso siyaaso iyo dhaqaalaba. dawladeenu waxay noqotay maamulada caalamka ka jira kuwa uugu horeeya ee aan lahayn musuqmasuq dawladaha burburay ee dhismaya,taasoo sababtay in bankiga aduunka iyo dawladaha caalamku si toosa lacaga ugu soo shubaan,lana galaan heshiisyo aamin dawladeed ah. waxaa laga yaabaa in aad istiraahdo sideen dawladaha dhisan ee nidaamkoodu fadhiyo ee ay kajiraan isla xisaabtanka aynu uuga horaynaa?
Waxaad qiimaysaa dalkeenu halka uu taagan yahay,iyo waxa uu soomaray,iyo xiliga dawladaani xilka qabatay,hadaba hadaad intaa fahantay qiimayntu waxaa weeye dal 30 sanadood baa basanaa,sidee maamulkoodu durbadiiba u sameeyeen xakamayn dhaqaale iyo ladagaalan musuqmaasuq. maxaad filaysaa haday dawladu hanato dalkoo dhan oo amaanku hagaago?
Qiimayntu waa midaas dal baabasan oo kabanaya iyo dal dhisan marka kii kabanaayay dakhligiisa quruxsado oo nidaam samaysto dhaqaale oo ku baxa halkii loogu talagalay uun iyo dal dawladiisu fadhido sida afrika badankeeda oo lun sada hantida qaranka way kala mudan yihiin weeye.
Dadka soomaaliyeed waa dad hawlkara,ganaacsato ah,deeqsi ah,qalbi furan dad la dhaqan leh,waxay ahayd in ay caasimadooda dib u dhisaan,waxay ahayd in ay beerahooda maal gashaan,waxay ahayd in badahooda khayraadka kala soobaxaan oo dhoofiyaan, waxay ahayd in ay ciidankooda garab istaagaan oo cadwga gudaha la dagaalaan iyo kan dibadaba,waxay ahayd in amaanka dalkooda ay hantaan oo ilaashadaan difaacdaan.
Soomaali haday gacmaha is qabsato cid hor istaagi kartaa majirto soomaali isku duuban. Guriga laga xukumo afrika waxaa laga dhisayaa MOGDISHO kan islaamkana waxaa laga dhisayaa MOGDISHO kan carabtana MOGDISHO Muda yar aduunkaan xukumaynaa kana muuqanaynaa.
WAXAA ILLAAHAY INOO SOO BIXIYAY MADAXWEYNE WADANI AH SOOMAALI USIMANTAHAY
In aan garano nicmada illaahay ina siiyay,soomaaliyeey oo aan u shukrinaa rabbigeen waa lagama maarmaan.Nicmadaas oo ah in aynu helay madaxweyne caadil ah oo aan qabiil inoogu kala ee xan,oo aan amaanadii jeebka ku shuban dhaqaalihii dalka sidii kuwii ka horeeyay ee ina soo maray.Nin dalkiisa jecel oo dadkiisa jecel oo raba in soomaaliya ku noolaato cizi iyo sharaf iyo dawladnimo oo ay helaan nabad iyo nolol.Taariikhda waayadan inama soomarin isagoo kale dhab ahaan laakiin maha in xasad iyo xiqdi inagu xanbaaro in aan la diriro haybada iyo karaamada illaahay siiyay Madaxweyne farmaajo! taasi waa siin iyo dheeri rabbi baana baxshee yaan la daalin dadoow.
Madax weynaheena Farmaajo waa nin qableh,han sare leh,iskula wayn soomaalinimadiisa jecel dalkiisa iyo dadkiisa. waana midii lagu yaqiinay waligeedba dadka soomaaliyeed. dalkeenu waa dal hodan ah dhan bad dhan beer dhan xoolo dhan macdan iyo dahab dhan shidaal waa in aan ka faa iidaysanaa si aan aduunka ugu noolaano inaga iyo caruurteenu nolol wanaagsan.
Waxaa jira dad yar oo soomaaliyeed oo gun ah,waayo? marabaan in ay indha hoodu arkaan,soomaaliya oo dawlad ah leh nidaam iyo kala danbayn,marabaan in ay arkaan soomaali quruxbadan oo nool,waxay jecel yihiin u shaqaynta cadawga soomaaliyeed iyo shisheeyaha,wadaniyad malaha dalka oo dhan way gadanayaan haday fursad u helaan. waana kuwa hada qarxinaya ee caasimada ku xasuuqaya shacabka masaakiinta ah ee soomaaliyeed ee waxba aan galabsan.
dalkeena waxay la jecel yihiin ceeb iyo dawlad la aan iyo dagaalo iyo qabiil iyo hoog iyo halaag. kuwaa waa in aan iska qabanaa shacab iyo dawladba oo meel uuga soo wada jeed sanaa. naxdin weeye in xasan sheekh iyo fiqi is waydiiyaan ciidamaday soo galiyeen Mogdisho ee dadkii halaagay, maxaa jira farmaajo iyo khayre isma casilayaan miyaa wali !!?
Waxaan wada ogsoonahay silsilidan xiran,ee ah siyaasiyiinta xananaqsan ee xasan sheekh iyo fiqi horboodayaan iyo ganaacsatada dadban ee bakaaraha fadhida iyo ciidanka labada waji leh mid ah ciidan qaran oo ah kuwa diiday isdiiwan galinta ciidan ee dawlada soomaaliya wado iyo isla iyaga oo ah wajiga kale ee ah afkoo la duubto ama qooxda shabaab oo isla iyaga uun ah. waxa hada caasimada qaraxyada iyo dilka qorshaydan ka wadaa waa iyaga oo diiwaan galinta ka gadoodsan cabsi ay ka qabaan in lakala diro iyo arimo kale oo jira.
Xasan sheekh iyo fiqi iyo ganaacsatada bakaaraha iyaga cidina mataabato dadku waa in uu wax gartaa! yaa lagu laayaa Mogdisho? waxaa mucaarad lagu yahay oo lagu gorgortamayaa waa dhiiga shacabka soomaaliyeed,si caalamku u yiraahdo waa siday iyaga la tahay ee dawladani amaankii waxba waa ka qaban wayday darteed ayaa waxaas oo umad ah loogu halaagayaa Mogdisho.kuwan u adeegaya dawladaha shisheeye waxay galaafteen kumanyaalo dhalin yaro soomaaliyeed oo xaq u lahaa in ay dalkooda ku noolaadaan si nabad ah. qofku markuu gaaro heer uu san illaahay kayaabayn oo maafiyonimo u banbaxo lacagna ku badasho diin iyo dad iyo dalba waa halis xun oo khatarku ah qaranka soomaaliyeed iyo noloshooda.
Waxaan jeclahay in aan hadii rabi idmo dib idiinka soo sheego lacag 3.700,000 (sadex malyuun iyo todobo boqol oo kun oo doolar) Emaraatku keenay 22.2.2019 Suuqabakaaraha oo ganaacsatadu ku eedaysay lun sashadeeda xasan sheekh iyo fiqi halka ay iyagu ku doodeen ganaacsatada rag kamid ah hala waydiiyo heerka maafiyanimadu marayso!! dalkeena dhalan rogan aan la qiyaasi karin marnaba ayaa ka jira ciyaarna maha 27 sanadood oo dawlad la aan ah.
shacabka soomaaliyeed waa waajib in aan garab istaagnaa ciidanka xooga dalkeena,waa waajib in aan maqalaa amarka madaxweyne heena,waa waajib in aan taageero dawladnimadeena iyo soomaalinimadeena iyo diinteena sida saxda ah.madax aad iyo aad u fiican baynu haysanaa mahadaa illaahaybaa leh aan hore u socono dalkeena badbaadsano.suuro gal sina uma aha in aan wada noolaano kuwa diidan in soomaaliya yeelato dawlad iyo karaamo waa waajib in aan sugnaa cadawgaas.
Labadan shaqsi iyo labada ay dhumiyeen oo kala ah cabdishakuur iyo mahad salaad waxay tusaale u yihiin soo bixitaanka kooxa gumaada shacabka soomaaliyeed burburkii dawladnimo 1991 waxayna kasoo jeedaan gobolada dhexe ee soomaaliya hadana lagu magacaabo galmudug waxyeelada ugu badan iyo gumaadka waxay badeen shacabka gaar ahaan mogdisho ku nool oo ay wali dhiigooda faraha kula jiraan mudadaas dheer ilaa hada.mabaa diida maafiyada caalamiga ahi makala jecla xasuuqa dadkooda iyo dadkale muhiimku waa danta gaarka ah iyo kasbasho doolar oo kaliya. waxaana ehel u ah gaalo iyo muslin sokeeye iyo shisheeye cidii doolar ay kahelayaan oo kaliya. Sidaa daraadeed ayaa aduunyada dawlad walba iyo shacab walbaa ula dagaalamaa oo isaga qabtaa maafiyada caalamiga ah.
shabakadan isku xiran ee maafiyada ahi,waxay soomaali ka dalbanayaan in lagu abaalmariyo qaraxyada iyo xasuuqa shacabkooda iyagoo codsanaya in farmaajo iyo khayre baneeyaan kuraasto kadibna iyaga lagu wareejiyo si kolkaa dalka soomaaliya uusan dib uugu kaban oo u yeelan dawlad hana qaada iyaguna ay hantaan doolarka iyo dhaqaale sida mabaa diidooduba tahay.
Waxay iibinayaan oo ku gorgortamayaan dhiiga shacabka mogdisho dagan,iyagoo wacad ku maray in ay sii wadayaan hadaan xilkaa lagu wareejin gumaadka shacabka!! waxay iska dhigaan mucaarad waasi dilaa qorsoon oo hada shacabkii soomaaliyeed kuwada baraarugay oo fahmay.cadawga gudaha in la daba galaa waa waajib qofkasta oo soomaali ah oo wadani ah saaran shacab iyo dawladba.
Cadawga soomaaliya waa shabakad maafiya ah oo isku xiran,oo kala ah sidan.
1.Siyaasiyiinta ku gabada siyaasada iyo mucaarad
2.Suuqa bakaaraha kuwa dhex jiifa ee ku gabada ganaacsatada
3.ciidanka leh labada waji mid kugabada ciidan qaran iyo mid afka duuban laakiin hal ah
4.Dawladaha shisheeye iyo maafiyada caalamiga ah
Intan oo isku xiran ayaa jirta oo hortaagan in dalka soomaaliya dawladnimo ka hanaqaado shacabkuna helo nabad iyo nolol,dalka talyaaniga marbaa maafiyadu xukumaysay,oo ka adkayd dawlada,kaloonbiya laatiin ameerika dalkoo dhan maafiyaa haysatay caalami ah oo dadka inta madaxa iyo gacmaha ka gooyaan jidadka sursuri jiray mudayna haysteen dalkaas,soomaaliya waxaa kajira mudo nusqarni ku dhaw maafiyo caalami ah maha halka soomaalidu wax ka raadisay oo ah qabiil iyo wax lamid ah.
Dalalkaa markii shacabkii iyo dawladii iskaashadeen laguna baraarugay dhagarta ayaa laga hortagay dalkana laga sifeeyay oo laguulaystay soomaali shaqaa utaal iyo halgan ay cadawga ku wajahaan hortaagan dawladnimada soomaaliyeed.